Telbee: Weghara ozi olu sitere na ndị na-ege ntị pọdkastị gị | Martech Zone
Telbee: Weghara ozi olu sitere na ndị na-ege ntị pọdkastị gị
Na Mọnde, Nọmba 23, 2021 Na Mọnde, Nọmba 23, 2021 Douglas Karr
Enweela pọdkastị ole na ole ebe m chere n'eziokwu na m gwara onye ọbịa ahụ okwu tupu oge eruo iji hụ na ha na-akpakọrịta na ndị na-ekwu okwu na-atọ ụtọ. Ọ chọrọ obere ọrụ iji hazie, hazie, dekọọ, dezie, bipụta na kwalite pọdkastị ọ bụla. Ọ na-abụkarị ihe mere m ji nọrọ n'azụ naanị m.
Martech Zone bụ ihe onwunwe mbụ m nke m na-edobe, mana Martech Zone Interviews na-enyere m aka ịnọgide na-arụ ọrụ na otú m si ekwu okwu n'ihu ọha, na-enyere m aka jikọọ na influencers na ndị m na-asọpụrụ na ụlọ ọrụ m, na-azụkwa akụkụ nke ndị na-ege m ntị na-enwe ekele maka ọdịyo n'elu ederede… ihe na-enweghị azụmahịa kwesịrị ilele anya.
Ozi olu Telbee
Telbee bụ ikpo okwu izi ozi olu ị nwere ike ibunye iji weghara ozi olu sitere na ndị ọbịa n'ọdịnihu ma ọ bụ ndị na-ege ntị pọdkastị gị. Ikpo okwu nwere nhọrọ ole na ole dị iche iche… ike wuo ebe ị na-aga ị nwere ike ịkekọrịta, wijetị nke ị nwere ike itinye na ibe ọ bụla, ma ọ bụ bọtịnụ okwu ị nwere ike itinye na saịtị ọ bụla site na edemede.
Edobere m popup ozi olu maka Martech Zone Ajụjụ ọnụ n'ime nkeji ole na ole na-eji ikpo okwu efu ha. Ụdị akwụ ụgwọ ahụ nwere atụmatụ nhazi ole na ole ọzọ, mana echere m na m ga-anwale ya. Ọ bụrụ na ị na-agụ nke a site na email ma ọ bụ RSS, pịa site na isiokwu na ị ga-enwe ike nwalee na-ahapụ m ozi.
Zitere m ozi olu
Ihe ngosi Telbee maka pọdkastị
Nke a bụ ụfọdụ ọmarịcha ọnọdụ telbee gosiputara maka iji ya na pọdkastị:
Dekọọ ọdịnaya ndị na-ege ntị ma mee ka pọdkastị gị nwee mmekọrịta - Kpọọ akụkọ, ajụjụ na aro wee dekọọ ha site na telbee. Gụọ obere URL anyị ka ị gaa, kesaa ya site na mgbasa ozi ọha na email, ma ọ bụ tinye ndekọ olu ozugbo na webụsaịtị gị. Site na ngwa dị mfe iji hazie, gee ntị na zaghachi - mgbe ọ bụla dabara adaba!
Gee ntị - ma ọ bụ gụọ - ntinye ma jikwaa ha n'ime igbe mbata raara onwe ya nye - Agakwaghị enyocha ozi-e, ntanetịime ọha, DM na ederede sitere na ndị na-ege gị ntị. Mee ka ndụ dịrị mfe! Nweta ndekọ gị niile n'otu igbe mbata, degharịa ya ma ọ bụrụ na-amasị gị. Nye ohere maka ndị na-akwado gị, ndị na-emepụta ihe na ndị otu niile ka ha kesaa na jikwaa. Gwuo ozugbo, kaa ọkacha mmasị gị akara, budata maka edezi, ma ọ bụ jiri olu zaghachi!
Zụlite ndị na-ege gị ntị - Soro n'ofe mgbasa ozi ọha ma gbaa ume ikesa - Kpọọ ndị na-eso ụzọ gị ka ha tinye aka na pọdkastị gị site na ikpo okwu mgbasa ozi ọ bụla, wee gosi ha ole ndị ọzọ na-enweta na ya! Nụrụ oge WOW mgbe ị zara - Ndị mmadụ na-ahụ ya n'anya mgbe ị zara, yana ọ na-adị ngwa ngwa na nke onwe site n'olu. Mgbe ahụ, ha ga-achọ n'ezie ịkọrọ ihe ị na-eme ma nyere aka itolite obodo gị.
Chekwa oge na nkụda mmụọ na imepụta ọdịnaya yana dee ihe - Ịhazi, idekọ ajụjụ ọnụ na imepụta akụkọ bụ ọrụ siri ike. Ya mere, jiri ikwu okwu dochie akara akara - ọ dị mfe na ngwa ngwa! Ma belata oge nhazi oge. Jiri telbee ka gị na ndị otu gị na ndị ọrụ gị na-akpakọrịta site n'olu. Ma ọ bụrụ na ị chefuru ajụjụ ahụ, ịchọrọ iweghachite, enweghị ike ime ka akwụkwọ akụkọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ ọbụna na-achọ ime ka ndụ onye ọ bụla dịkwuo mfe, jiri telbee dekọọ ndị ọbịa gị! Site na ngwaọrụ ndị ọkachamara maka ibugo ọdịyo, nhọrọ bitrate na ihuenyo kewaa iji kesaa ajụjụ.
Telbee ewepụtala Ntuziaka maka ntinye aka ọdịyo pọdkastị.
Ntuziaka maka ntinye aka ọdịyo pọdkastị Bido ugbu a na Telbee
Tags: audiomkpokọta ọdịyookwu ọdịyompempe akwụkwọozi ọdịyoozi ọdịyowijetị ọdịyotelbeeolumkpokọta oluokwu oluụdị oluozi oluozi oluolu ndekọwijetị olu
Ịkwọ ụgbọ mmiri: Welite mgbanwe na ịzụrụ otu n'ụlọ ahịa Shopify gị